Dooro degmo Dooro degmo Gotland
Dheeraad ku saabsan shirkada guryaha degmadu iska leedahay ka akhri bogga GotlandsHems. Dheeraad ku saabsan shirkada yar yar ee guryaha ee Gotland ka akhri. Bogga internetka ee Dowladda hoose Gotland ka aqriso warbixin dheeraad ku saabsan guryahay iwm.
Akhri dheeraad ku saabsan Jaamacada Uppsala, Campus Gotland. Akhri dheeraad ku saabsan Kuliyadaha dadka waaweyn iyo waxbarashada dadka waaweyn ee degmadu maamusho. Bogga internetka ee Dowladda hoose Gotland ka aqriso warbixin dheeraad ku saabsan waxbarashada ilmaha iyo dadka waawayn.